Bogomolets National Medical University - Study Mbbs na Ukraine
Bogomolets National Medical University Nkọwa
Echefukwala atụle Bogomolets National Medical University
Jụọnụ Bogomolets National Medical University
Bogomolets National Medical University na a elu ọgwụ na ahụ ike ụlọ akwụkwọ hiwere na 1841 na Kyiv, Ukraine. The akwụkwọ na-aha ya bụ mgbe physiologist Alexander A. Bogomolets. NMU na-enye ọgwụ ọzụzụ ruo ihe karịrị 10,000 ụmụ akwụkwọ, gụnyere ihe 1,300 mba ọzọ si 56 mba. The mahadum ewe ihe 1200 nkụzi.
Chief elu ọgwụ na ahụ ike izi oruru n'etiti elu ọgwụ na ahụ ike ụlọ akwụkwọ na Ukraine na agụmakwụkwọ na methodical ọrụ na mma nke iru eru ahụ maka nkà mmụta sayensị na izi ihe mkpara na elu ọgwụ na ahụ ike n'ụlọ akwụkwọ nke Ukraine nke I-IV nzere ntozu etoju;
Basic elu ike ụlọ akwụkwọ na mmejuputa iwu Bologna nkwupụta ụkpụrụ n'ime ịgbazigharị usoro ọgwụ akwụkwọ Ukraine;
12 ikike iche, 7 institutes na emmepe, 78 ngalaba, 30 nkewa na laboratories;
1,200 ndị ọkà mmụta sayensị na ndị nkụzi, otu nke: 137 professors, 188 dọkịta nke sayensị, 341 nnyemaaka ọkachamara na 719 aga ime nke sayensị;
n'elu 200 academicians na kwekọrọ ekwekọ òtù nke Them, AMS, APS nke Ukraine, Laureates nke State Nrite nke Ukraine, asọpụrụ ọrụ nke sayensị na technology, ndị ọrụ agụmakwụkwọ na dọkịta, nakwa dị ka echepụta nke Ukraine;
10 specialized ọkà mmụta sayensị councils na-agbachitere nke DPhil na Ph.D adian ruru 21 na nkà mmụta sayensị ọpụrụiche;
Kwa afọ na mahadum na-enweta n'elu 200 Ikike nchọpụta Kemịkalụ on ozizi ọhụrụ, esetịpụ odika 60 na nkà mmụta sayensị forums, ebipụta n'elu 50 na nkà mmụta sayensị monographs, 30 na nkà mmụta sayensị na magazin na collections na nkà mmụta sayensị ọrụ;
N'ime 13,000 ụmụ akwụkwọ, dọkịta-interns, nwe-, bi, post-agụsị akwụkwọ na mmadụ, -arụ ọrụ maka dọkịta ogo, otu nke banyere 1,200 ụmụ amaala obodo ọzọ;
39% nke ụmụ akwụkwọ na-amụ ruru ala iji, 61% – on contractual ndabere, otu nke ndị nnọchianya si niile n'ógbè na Ukraine.
na-agụsị akwụkwọ si University na-arụ ọrụ na onye ọ bụla anọ ná mba ụwa;
English na-ekwu okwu ngalaba, nke a na-akpọ Kyiv ọgwụ Harvard, Ukrainian ọgwụ lyceum, usoro tupu University ọzụzụ na-arụ ọrụ ahụmahụ ruo ihe karịrị iri afọ anọ;
43 nkwekọrịta na mba na mba ọzọ na òtù oru, ngalaba-nchoputa nke Interuniversity center nke sayensị na imekọ ihe ọnụ na mba na South na South-Eastern Europe, East European yinye mahadum, soò na 27 mmụta ma na- 49 na nkà mmụta sayensị mba oru ngo;
Onye na EU usoro "Erasmus Mundus" na-enye na agagharị nke ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi, ọnụ na Caroline Institute (Sweden) ọ implements agụmakwụkwọ na nkà mmụta sayensị omume na ọzụzụ nke na-eto ọkà mmụta sayensị;
University ifịk ifịk na-akwado mkpebi WHO na ERB WHO;
Scientific n'ọbá akwụkwọ na ngwaahịa ihe karịrị 700 ths. mpịakọta, 26 internet ọmụmụ, ihe dị ka 1 200 kọmputa na agụmakwụkwọ usoro;
Stomatological ọgwụ center - otu n'ime ihe kasị ike na Europe, Ezubere nke 300 oche. Kwa afọ, ihe karịrị 290 ths. ọbịa ịga center;
137 adakarị bases, ebe ihe dị ka 200,000 ọrịa na-emeso kwa afọ, n'elu 12 ths. -amụ na-e na ruo 60 ths. ịkpa mgbochi na-mere;
8 agụmakwụkwọ ụlọ, okwu ihu ọha Ụlọ Nzukọ Alaeze na n'ihi 2.8 ths. nke ebe, Ukrainian ọzụzụ center nke ezinụlọ na nkà mmụta ọgwụ, 26 kọmputa ụlọ;
7 gọọmenti rụrụ. 12 ụmụ akwụkwọ 'canteens n'ụlọ, egwuregwu mgbagwoju, sanatorium-preventorium kwa 75 ebe na ntụrụndụ center na Konch-Zaspa kwa 407 ebe;
Ịrụ nke ọhụrụ iri abụọ na isii storey agụmakwụkwọ laboratorial ụlọ ahụ ma na J.Randall gọọmenti rụrụ malitere na 2006;
22 -amu amu talent iche iche, otu nke 5 nwere ọnọdụ Ndị mmadụ ndị; 9 egwuregwu klọb;
ama egwuregwu, akaebe nke Europe na World, mmeri nke ihe niile na-Ukraine na International Olympiads na n'asọmpi na-amụ na Mahadum;
ụmụ akwụkwọ 'onwe-ọchịchị na ụmụ akwụkwọ' na nkà mmụta sayensị mmadụ, aha mgbe O.A. Kysil n'ụzọ dị irè arụ ọrụ mgbe nile na-etoju;
dị ka ala mba si Ministry agụmakwụkwọ na sayensị nke Ukraine, na University na-ewe mbụ ebe n'etiti elu ọgwụ na ahụ ike n'ụlọ akwụkwọ nke III-IV nzere ntozu etoju ma na-anọ ebe n'etiti elu n'ụlọ akwụkwọ nke Ukraine;
Asọpụrụ aha "Laureate nke zoo na Nhoputa" mwekota agụmakwụkwọ nke Ukraine n'ime European obodo "na" innovations na mmejuputa iwu ọmụma nkwurịta okwu teknụzụ n'ime izi omume ".
The mahadum bụ ọdịda na Golden Ọla na International ngosi nke agụmakwụkwọ njikọ "Modern akwụkwọ Ukraine" dị iche iche Nhoputa maka ọtụtụ afọ a n'usoro.
New oge a okwu ihu ọha n'Ụlọ Nzukọ Ọ dịghị 3, aha mgbe V.F. Voyno-Yasenetsky, e mepere, n'ihi na nke mahadum e ọdịda na ubre nke mba na-agbata n'ọsọ "Prointegration awards 2010" ke nomination "Best ngwọta maka izi ndi oru";
N'ihi na oge mbụ mahadum so ke obio pụrụ iche omume na ọzụzụ nke ọgwụ na ahụ ike na-arụ ọrụ maka nlekọta ahụ ike na establishments na c. Kyiv maka 2011-2017;
Ncheta mbadamba nkume ndị e na-wuru na nsọpụrụ nke mbụ diin nke ike ngalaba nke St. Volodymyr University, prọfesọ V.O. Karavayev, ma ama na-agụsị akwụkwọ V.F. Voyno-Yasenetskyy (St. ọnya) ma kpọọ-edemede na onye so dee M.A. Bulgakov;
Gụsịrị akwụkwọ na mahadum natara ubre nke mba ụdị "ubre Mgbakwunye"
The oruru bụ onye na Constrium nke European mahadum: na September, 2011, ọ esonyere Magna Charta Universitatum.
Admission usoro na Bogomolets National Medical University
N'ihi emetụta Bogomolets National Medical University mba ọzọ na ụmụ akwụkwọ ga-eme ide online via Ukrainian Admission Center.
Medical ngalaba No 1
Medical ngalaba No 2
Medical ngalaba No 3
Medical ngalaba No 4
Medical psychological ngalaba
Ya Emperor Onye nwem Mykola m bịanyere aka N'atu Rescript banyere emeghe ọgwụ ngalaba na St. Volodymyr University (29.04 ochie style).
Council of St. Volodymyr University mma mkpebi banyere mmalite 1st ọgwụ ngalaba na September 1841. First mbanye - 29 ụmụ akwụkwọ. on 23 (9), September, prọfesọ M.I. Kozlov agụ mbụ okwu ihu ọha na Mmebe, na na 26 (12), September, prọfesọ V.O. Karavayev - mbụ okwu ihu ọha na akwụkwọ nkà ihe ọmụma na ụkpụrụ nke na nkà mmụta ọgwụ.
malitere ọrụ nke ọgwụ ngalaba n'ihi na ọhụrụ gaa dị ka nke 1842, dị ka nke ozizi nke extra achị e organizationally gburu, ngalaba nke ala na nkà mmụta ọgwụ ọmụmụ e establishedа
prọfesọ V.O. Karavayev ghọrọ ndị mbụ onyeisi ọgwụ ngalaba na St. Volodymyr University
Oghere nke anatomical nkiri na ọgwụ ngalaba
Na-amụrụ ihe na nkà mmụta sayensị mmadụ "Clinical otu ụmụ akwụkwọ-ndị dọkịta" hazie. The nhazi nke ọha mmadụ A. Kysil, bụ onye mesịrị ghọọ a ma ama pediatrist na ọha ndú.
nke ogwugwo na ọgwụgwọ clinics na-wuru
na obstetric ọgwụ e wuru;
Kyiv Institute of Health Care, nke n'otu na ahụ ike na ngalaba nke St. Volodymyr University, Inyom Medical Institute, ọgwụ ngalaba nke Ukrainian State University, e guzobere. The odontologic mahadum, mgbe e mesịrị ghọọ ngalaba na otu aha, gụnyere n'ime ya na October 1920.
Kyiv Institute of Health Care e renamed n'ime Kyiv State Medical Academy, nke e mechara ghọrọ Kyiv ọgwụ guzobe
akwụkwọ akụkọ "Red dọkịta, nke na 1936 e renamed n'ime "Medical cadres", e guzobere.
mgbe Great Agha Ịhụ Mba n'Anya malitere na ulo akwukwo a kpọpụrụ na c. Kharkiv na mgbe e mesịrị ka Chelyabinsk.
KMI ọhụrụ na klas na Kyiv
Kyiv Medical Institute e nyere na aha nke President of Academy nke Sciences nke UkrSSR O.O. Bogomolets.
The akụkọ ihe mere eme ihe ngosi nka nke nkà mmụta ọgwụ haziri na ndabere nke na ulo akwukwo (ebe ọ bụ na 1982 - National ngosi nka nke nkà mmụta ọgwụ nke Ukraine).
Na ulo akwukwo e reorganized n'ime Ukrainian O.O. Bogomolets ala ọgwụ mahadum.
Site na Iwu ahụ President of Ukraine mahadum natara ọnọdụ nke O.O. Bogomolets National Medical University.
prọfesọ V.F. Moskalenko a họpụtara na post of Rector site na ogbako nke na-anọchite anya nke oru mkpokọta na onye kwuo uche ụkpụrụ maka oge mbụ na ọrụ nke izi oruru, n'oge ahụ ọ bụ nke kwekọrọ so AMS nke Ukraine, dọkịta nke nkà mmụta ọgwụ, asọpụrụ dọkịta nke Ukraine, Minister nke nlekọta ahụ ike nke Ukraine (2000-2002); ugbu a - academician nke NAMS na kwekọrọ ekwekọ so NAPS nke Ukraine, osote onyeisi oche nke NAMS nke Ukraine, asọpụrụ ọrụ nke sayensị na nkà na ụzụ nke Ukraine, so WHO si Kọmitii, isi na ngalaba nke na-elekọta na nkà mmụta ọgwụ na ahụ ike na-elekọta, isi pụrụ iche ọkachamara na MHC nke Ukraine na nzukọ na management nke ike na-elekọta
The atụ nke University - akara, Ukwe na Flag – e na-mma n'ihi na oge mbụ na akụkọ ihe mere eme nke oruru
Reorganization nke stomatological polyclinic nke MHC nke Ukraine na NMU n'ime Stomatological ọgwụ center nke University
The University a họpụtara dị ka ndị isi oruru na nchikota maka mmejuputa iwu Bologna nkwupụta ndokwa na elu ọgwụ na ahụ ike mmuta nke MHC nke Ukraine
Ele atụmatụ maka mmepe nke University maka 2004-2010 e mepụtara na mma site Scientific Council - omume akwụkwọ banyere usoro mmepe nke oruru, kwadebere maka oge mbụ na akụkọ ihe mere eme
Establishment of English na-ekwu okwu ozizi nke ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na Mahadum
Establishment of Eastern European netwọk nke mahadum, nke na-agụnye 35 elu na ụlọ akwụkwọ site na 7 mba, n'okpuru aegis nke University iji ike na ọnụ nke mba, sogide mmezu nke Bologna nkwupụta ụkpụrụ.
o.o. Bogomolets National Medical University na-eme ememe 165th ncheta kemgbe ntọala ya,
125nke ụbọchị ọmụmụ nke academician O.O. Bogomolets,
125nke ncheta kemgbe oruru nke O.O. Kysil ụmụ akwụkwọ 'na nkà mmụta sayensị mmadụ,
115nke ụbọchị ọmụmụ nke gụsịrị akwụkwọ na oruru M.O. Bulgakov.
Ịrụ nke ọhụrụ oge a agụmakwụkwọ laboratorial mgbagwoju nke University na ọbá akwụkwọ malitere.
dị ka ala mba nke Ministry nke nlekọta ahụ ike nke Ukraine - mbụ n'etiti elu n'ụlọ akwụkwọ nke III-IV nzere ntozu etoju ruru ka ntụziaka nke ike na-elekọta;
Golden nrite na International ngosi "Modern akwụkwọ Ukraine" na nomination "Integration nke sayensị na-akụziri na elu ụlọ akwụkwọ";
The naanị na steeti ngalaba maka ọzụzụ ndị dọkịta na nọ nke anụ ahụ na omenala na egwuregwu na O.O. Bogomolets National mahadum na National mahadum mmụta mmega ahụ na egwuregwu nke Ukraine;
1st ebe mba si Ministry nke nlekọta ahụ ike nke Ukraine n'etiti elu n'ụlọ akwụkwọ nke III-IV nzere ntozu etoju ruru direction "Health na-elekọta";
3Rd ebe na steeti mba si Ministry nke nlekọta ahụ ike nke Ukraine "TOP-200 Ukraine"
Golden Nrite na International ngosi "Modern akwụkwọ Ukraine" na nomination "Innovative ọmụmụ na agụmakwụkwọ ka elu"; Asọpụrụ aha "Onye Ndú na oge a na-akụziri";
Famous okwu ihu ọha site Laureate nke Nobel Nrite, academician Yevgen Chazov, onye e ọdịda na aha nke asọpụrụ dọkịta nke nkà mmụta ọgwụ na University.
The University e ọdịda abụọ Golden Ọla na International ngosi "Modern akwụkwọ Ukraine" na "Education na ọrụ"; asọpụrụ aha "Onye Ndú na nguzobe nke oge a mmụta ọrịa AIDS".
na University e ọdịda na 4 Golden nrite na International pụrụ iche ngosi "Education na ọrụ", "Innovative ọmụmụ na ọzụzụ" n'ihi na "Development nke ụmụ akwụkwọ 'nnyocha sayensị na-arụ ọrụ", "Ọrụ nduzi n'etiti ntorobịa", "Innovative ọmụmụ na agụmakwụkwọ ka elu", "Innovative ọmụmụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị", "International imekọ ihe ọnụ na okirikiri nke agụmakwụkwọ na sayensị";
The ukwu nzukọ, ewepụtara ngụsị akwụkwọ nke dọkịta na pharmacists, a na-National Obí nkà "Ukraine" na òkè nke Prime-Minister nke Ukraine, Onyeisi oche nke nlekọta Council of University Mykola Yanovych Azarov.
prọfesọ V.F. Moskalenko, Vice-president nke NAMS nke Ukraine, academician nke NAMS na kwekọrọ ekwekọ so NAPS nke Ukraine, asọpụrụ ọrụ nke sayensị na nkà na ụzụ nke Ukraine, asọpụrụ dọkịta nke Ukraine, isi na ngalaba nke na-elekọta na nkà mmụta ọgwụ na ahụ ike na-elekọta, a họpụtara ka post of Rector otu olu nke ugboro abụọ site na ogbako nke na-anọchite anya maka oru mkpokọta nke University.
Modern okwu ihu ọha n'Ụlọ Nzukọ Ọ dịghị 3, aha mgbe V.F. Voyno-Yasenetskyy, nke ghọrọ ndị na-eto eto na International n'asọmpi n'etiti CIS mba "Prointegration awards 2010", e mepere. The nkeji nke mmadụ na-amụ na University amụbawo ruo 10 ths. ndị mmadụ. The ọzụzụ pụrụ iche usoro ihe omume ndị dọkịta na-efu nke Kyiv mpaghara ala ochichi na oru na nke mbụ n'etiti elu ọgwụ n'ụlọ akwụkwọ nke Ukraine.
President of Ukraine Victor Fedorovich Yanukovich na Bishọp nke Kyiv na niile Ukraine, Primate nke Ukrainian Orthodox Church VOLODYMYR congratulated na-agụsị akwụkwọ si University.
o.o. Bogomolets National Medical University na-eme ememe 170th ncheta kemgbe ntọala, 200nke ụbọchị ọmụmụ maka Prọfesọ Volodymyr Opanasovych Karavayev, 130nke ụbọchị ọmụmụ maka academician Oleksander Oleksandrovych Bogomolets, 130nke ncheta maka oruru nke O.A. Kysil ụmụ akwụkwọ 'na nkà mmụta sayensị mmadụ, 120nke ụbọchị ọmụmụ maka Mykhaylo Afanasiyovych Bulgakov, 20nke ncheta kemgbe oruru nke Ukrainian ọgwụ lyceum na O.O. Bogomolets NMU;
City ọzụzụ pụrụ iche usoro ihe omume nke ndị dọkịta maka nlekọta ahụ ike na iche na c. Kyiv maka 2011-2017 e emejuputa atumatu maka oge mbụ n'etiti elu n'ụlọ akwụkwọ nke Ukraine;
Golden nrite na mba ngosi nke izi establishments "Modern akwụkwọ Ukraine" na nomination "Ime Mmụọ mmepe ntorobịa na n'ụzọ anụ ahụ ndozi";
1st ebe mba si Ministry agụmakwụkwọ na sayensị, na-eto eto na egwuregwu nke Ukraine n'etiti elu n'ụlọ akwụkwọ nke III-IV nzere ntozu etoju ke nomination "Health na-elekọta";
4nke ebe na ala fim n'etiti elu ụlọ akwụkwọ n'ime UNESCO oru ngo "TOP-200 Ukraine";
Ele mgbagwoju atụmatụ maka mmepe nke University maka 2011-2017 e mepụtara na mma site Scientific Council
Ncheta mbadamba nkume ndị e na nsọpụrụ nke mbụ diin nke ike ngalaba na St. Volodymyr University, prọfesọ V.O. Karavayev, ma ama na-agụsị akwụkwọ V.F. Voyno-Yasenetskyy (St. ọnya) ma kpọọ-edemede na onye so dee M.A. Bulgakov a rụnyere ndutịm na morphological ụlọ nke University;
The na-agụsị akwụkwọ si University natara ubre nke mba ụdị "ubre Mgbakwunye" n'ihi na oge mbụ;
The University e kwetara dị ka Onye Ndú nke oge a na-akụziri-2011, ọdịda na Grand Prix na ọlaedo nrite na mba ngosi "Modern agụmakwụkwọ njikọ";
The University esonyere mkpakọrịta nke Great Charter maka eduga mahadum ụwa (Magna Charta Universitatum), c. Bologna, Italy.
Ị chọrọ atụle Bogomolets National Medical University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Bogomolets National Medical University na Map
photos: Bogomolets National Medical University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Bogomolets National Medical University.